သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၇-၂) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
အခြေခံလစာ သုံးသောင်းကျပ် တိုးမြှင့်မပေးမချင်း အလုပ်သမားများ ဆက်လက်ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုသွားမည်
လောက်​ကိုင် စစ်​ဘေး​ရှောင်​တွေ ရောက်လာ​နေဆဲ
ဂျီဟာ့ဒီဂျွန် လိုအကြမ်းဖက်သမားတွေ လွတ်မထွက်ရေး
ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ကိုမင်းသွေးသစ်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း-ချမ်းမြေ့ခိုင်၊ သူရိန်ကျော်
လေးပွင့်ဆိုင် သဘောတူညီချက်များအား အစိုးရက ဖောက်ဖျက်နေကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့
အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှု တားမြစ်ဥပဒေ တောင်ကိုရီးယား ပယ်ဖျက်
လုံခြုံ​ရေး​ကောင်​စီ အရေးပေါ် ခေါ်​ဖို့ ယူ​နက်စ်​စ​ကို တောင်း​ဆို
ဂျီ​ဟာ့ဒ်​ဒီ ဂျွန် ဘယ်​သူ​လဲ ပေါ်လာပြီ
ပြည်တွင်း ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေ ရှမ်းလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ရှမ်းလူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ စုပေါင်းဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ ရှမ်းပြည်ညီညွတ်ရေးကော်မတီ ရဲ့ နှစ်ပါတ်လည်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တနေရာမှာ ဒီကနေ့ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာ ရှမ်းပြည်ညီညွတ်ရေးတည်ဆောက်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက် မူဘောင်ရေးဆွဲဖို့ ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးခဲ့တယ် လို့လည်း အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ ဒီ
ဘလော့ဂါ အသတ်ခံရမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ စုရုံး ဆန္ဒပြ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်မှုတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်သူ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် နွယ်ဖွား အမေရိကန် နိုင်ငံသား အထင်ကရ ဘလော့ဂါ တစ်ဦးဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ၊ ဒက်ကာ မြို့ကို သွားရောက် လည်ပတ်စဉ် အတွင်း ခေါင်းဖြတ်သတ် ခံခဲ့ရပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ Avijit Roy ဟာ စာပေ ပွဲတော် တစ်ခု တက်ရောက်ဖို့ ဇနီးသည်နဲ့ အတူ ဒက်ကာမြို့ကို ရောက်ရှိ နေ
Posted: 27 Feb 2015 06:01 AM PST
ပြစ်ဒဏ် မချမီ ဟောင်ကောင်ရောက် အိမ်ဖော်တွေ တရားရုံး ရှေ့မှာ ဆန္ဒပြကြ ဟောင်ကောင်မှာ အင်ဒိုနီးရှား အိမ်အကူ အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို မတရား နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ရှင် ဟောင်ကောင် အမျိုးသမီးကို ထောင်ဒဏ် ၆နှစ် ချမှတ် လိုက်ပါတယ်။ Law Wan-tung ဆိုသူ အလုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဟာ အိမ်အကူ အမျိုးသမီးကို ကိုယ်ထိ လက်ရောက် ထိခိုက် နစ်နာစေမှု၊ ရာဇဝတ်မှု မြောက်တဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ လုပ်ခ လစာ ပေးရန် ပျက်ကွက်မှု တွေနဲ့ အခုလ
Posted: 27 Feb 2015 04:12 AM PST
ဓာတ်ပုံ – dailynews.co.th မကြာခင်ရက်ပိုင်းက မွန်အမျိုးသမီး ၁ ဦး အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ထိုင်းတောင်ပိုင်း ဆူရတ်ဌာနီခရိုင် ကော့စမွီကျွန်းမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့ မနက်အစောပိုင်းက အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ် မြန်မာအလုပ်သမား ၁ ဦး ထပ်မံ အသတ်ခံရတယ်လို့ ထိုင်းဒေးလီးနယူးစ်သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ကော့စမွီမြို့ ဘော်ဖွတ်ရပ်ကွက် နယ်မြေ ၆ ထဲမှာ လူ ၁ ဦးရဲ့အလောင်း တွေ့ရှိကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက် မနက်မှာ သတင်းရရှိချက်
Posted: 27 Feb 2015 03:06 AM PST
မုံရွာမြို့က နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အလွတ်တန်း ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် ကိုအောင်နေမျိုးကို ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ် အစိုးရမေတ္တာ ပျက်အောင် ရေးတင်တာကြောင့် သက်ဆိုင်ရာက ဖမ်းဆီးအမှု ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်မှာ သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ရဲမှူးမြင့်လွင်က တရားလိုလုပ်ပြီး မုံရွာရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပါတယ်။ အလွတ်တန်းသတင်းထောက် ကိုအောင်နေမျိုးကို ဖေဖော်ဝါရီ မနက်ပိုင်းက လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာလို့ မုံ
Posted: 27 Feb 2015 03:00 AM PST
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ရက်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်။ ကေအိုင်စီ ကရင်ပြည်နယ် ကျိုက်ဒုံမြို့နယ်ခွဲအတွင်းရှိ အဇင်းကျေးရွာအနီးတွင် ယခင် ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင်တပ်မ တော် (DKBA)မှ တပ်မှူးဟောင်း ဗိုလ်မှူးကြီး စောဆန်းအောင်အဖွဲ့နှင့် ကျိုက်ဒုံမြို့နယ် အခြေစိုက် မြန်မာအစိုးရ တပ် စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်-စကခ(၁၃) လက်အောက်ခံတပ်တို့ ယနေ့နံနက်၌ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ အဆိုပါ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍
Posted: 27 Feb 2015 02:26 AM PST
IS အဖွဲ့ဝင်တွေက ပြတိုက်က ရှေးဟောင်းရုပ်ထုတွေကို ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆို (Credit: Reuters) IS ​အစ္စလာမ်မစ် ​အဖွဲ့က ​အီရတ်နိုင်ငံက ​ရှေးဟောင်း ​ရုပ်ထုနဲ့ ​အနုပညာလက်ရာတွေ ​ဖျက်ဆီးနေတဲ့ ​ဗီဒီယိုကို ​ထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ ​ဗီဒီယိုမှာ ​ပြသချက်အရ ​Mosul ​မြို့က ​ပြတိုက်လို့ ​ယူဆရတဲ့နေရာက ​ရှေးဟောင်း ​ရုပ်ထုတွေကို ​ထုခွဲနေတဲ့ ​ပုံကို ​ပြသထားပါတယ်။ ပညာရှင်တွေရဲ့ ​အဆိုအရ ​အဲဒီ ​အနုပညာလက်ရာတွေဟာ ​အဖိုးမဖြ
Posted: 27 Feb 2015 02:08 AM PST
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက် ၂၀၁၅ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့၌ တရုတ်နိုင်ငံ သို့ တင် ပို့မည့် သတ္တုကျောက် အပြည့်တင် ကုမ္မဏီ၏ကားတန်း ကို ဒေသခံပြည်သူ များစုပေါင်းပြီး ဝိုင်းဝန်းတားဆီးသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ယမန် နေ့ က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ သတ္တုကျောက်တင်ကားများသည် ငွေကမ္ဘာကျော် သတ္တုတူးဖော်ရေး ကုမ္မဏီမှ ကားအချို့ နှင့် ကုမ္မဏီမှ ဌားရမ်းထားသော နမ့်ခမ်းမြို့ ဒေ သခံ တစ်ချို့၏ ကားများဖြစ်ကြပြီး မြို့အနောက် တောင်
ကျမတိုဘ၀များ-ရောင်းရန်မဟုတ် အစီရင်ခံစာ ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ရာမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖော်ထုတ်နေတဲ့ ထားဝယ်အမျိုးသမီး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေကို ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဘက်တော်သားတွေက နှောင့်ယှက်ရန်ပြုနေတယ်လို့ ထားဝယ်အမျိုးသမီး သမဂ္ဂက ပြောပါတယ်။ ထားဝယ်အမျိုး သမီးသမဂ္ဂအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့လက ‘ကျမတိုဘ၀ များ-ရောင်းရန်မဟုတ်’ ဆိုတဲ့ အစီရင်
Posted: 27 Feb 2015 01:59 AM PST
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲနီးကပ်လာချိန် စာမေးပွဲဖြေဆိုရာတွင် စာခိုးချရန် အထူးပြင်ဆင်ထားသော အရပ်အခေါ် မိုက်ခရိုစာအုပ်များ ရောင်းအားကောင်းနေကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ အဆိုပါစာအုပ်များကို ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင် ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ပန်းဆိုးတန်းအနီးတ၀ိုက်ရှိ မိတ္တူဆိုင်များ၊ စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်များ၊ လမ်းဘေးရှိနာရီ အဟောင်းပြင်ဆိုင်များတွင် လျှို့ဝှက်စွာရောင်းဝယ်နေကြောင်း သိရသည်။ “ဒီနှစ်က အရင်နှစ်တွေလို မဟုတ်ဘူး
Posted: 27 Feb 2015 01:58 AM PST
ပုံ-ကျန်ရစ်သူမိသားစုများက ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်လည်ပြောပြနေစဉ် စလင်းမြို့နယ် ဆေးရုံတွင် မွေးလူနာတဦး နာရီပေါင်းများစွာ စောင့်ဆိုင်းစေခဲ့ပြီး အချိန်လွန်မှ ခွဲစိတ်မွေးဖွားပေးခဲ့ရာမှ ထိုလူနာမှာ အသက်မဆုံးရှုံးသင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း အသက်ဆုံး မိသားစုဝင်များ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ စလင်းမြို့နယ် ဆင်ကျုံရွာမှ သေဆုံးသူ မမြင့်မြင့် အသက် (၃၄ နှစ်) သည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက် ၇ နာရီတွင် ဆေးရုံရောက်ပြီး ည ၇
Posted: 27 Feb 2015 01:51 AM PST
မုံရွာမြို့က ကြက်မွေးမြူရေးဇုန်မှာ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ (H5N1) စစ်ဆေးတွေ့ရှိတာကြောင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသတွင်းမှာ ကြက်ငှက်တွေ သယ်ယူဖြတ်သန်းခွင့် ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ မုံရွာမြို့က ကြက်မွေးမြူရေးဇုန်မှာရှိတဲ့ ကြက်ခြံနဲ့ ငုံးခြံတွေမှာ အစုအပြုံလိုက် သေဆုံးမှုတွေ ရှိတဲ့အတွက် မုံရွာမြို့နယ် မွေးမြူရေးနဲ့ ကုသရေးဦးစီးဌာနက လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသတွင်းမှာ ကြက်ငှက်ဖြတ်သ
Posted: 26 Feb 2015 08:20 PM PST
တိုက်ခိုက်ခံရသည့် စပိန်နိုင်ငံသား (ဓာတ်ပုံ - Zaw Shinn facebook) မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်စဉ်အတွင်း တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ စပိန်နိုင်ငံသားတစ်ဦး ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေစဉ်အတွင်း၊ မနေ့က ဆေးရုံက ရုတ်တရက်ဆင်းသွားတဲ့ အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့က လိုက်လံရှာဖွေနေပါတယ်။ စပိန်သံရုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး အဲဒီ့နိုင်ငံခြားသားကို လိုက်လံရှာဖွေနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်းခရိုင် ဒုတိယရဲတပ်ဖွဲ့မှူြး
Posted: 26 Feb 2015 06:38 PM PST
ဝါရှင်တန်တွင်း ဆေးခြောက် တရားဝင် သုံးစွဲခွင့် လှုပ်ရှားမှု။ (နိုဝင်ဘာ ၄-၂၀၁၄) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာ ဆေးခြောက်ကို တရားဝင် သုံးစွဲခွင့်ရတဲ့ ဥပဒေတခု ဒီကနေ့ကစပြီး အသက်ဝင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာလ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲမှာ မဲဆန္ဒရှင်အများစု ထောက်ခံခဲ့တဲ့ ဒီဥပဒေဟာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညကနေ ကြာသပတေးနေ့ မနက်ဆီကူးပြောင်းတဲ့ သန်းခေါင်ကျော်ချိန်ကစပြီး အသက်ဝင်တာပါ။ ဒီဥပဒေအရ အသက် ၂၁ နှစ်
Posted: 26 Feb 2015 06:37 PM PST
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ဆန္ဒပြ အလုပ်သမားများအား ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ၀န်ကြီးဌာနက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများမှတစ်ဆင့် သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ၌ ““ဆူပူအကြမ်းဖက် ဆန္ဒပြအလုပ်သမားများ””ဟု သုံးနှုန်းထားမှုအပေါ် ဝေဖန် မှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိသည်။ လုပ်ခလစာ တိုးတောင်းကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သော အလုပ်သမားများအား အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူ
Posted: 26 Feb 2015 06:36 PM PST
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ အစိုးရက ပြင်းထန်သော ဖြိုခွင်းမှုများ ပြုလုပ်သော်လည်း ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုန် အလုပ်သမား သပိတ်စခန်း ကို ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုန်ရှိ E land Myanmar အထည်ချုပ် စက်ရုံအနီးတွင် ယနေ့အထိ ဖွင့်လှစ်ထားဆဲ ဖြစ် သည်။ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရနှင့် အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဖူလုံရေး ၀န်ကြီး ဌာနတို့၏ တစ်ဖက်သတ် ဆန်သော ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် ဥပဒေလွန် လုပ်ဆောင်နေပါသည် ဟု
Posted: 26 Feb 2015 06:35 PM PST
နေ့ကြေး တစ်ထောင့်တစ်ရာကျော်နဲ့ ထမင်းစားလို့ မရဘူးလေ … ဆန်တစ်ပြည်တောင် ၁၂၀၀ ပေးရ တယ် ဆန်တစ်ပြည် ၁၂၀၀ ဆိုတာတောင်မှ အကြမ်းပဲရှိသေးတယ် … ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်ရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံ (၃)ရုံမှ အလုပ်သမား (၂၀၀၀)ကျော်ခန့်သည် မူလရရှိထားသည့် အခြေခံလစာမှာ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေသည့်အတွက် လက်ရှိရရှိနေသည့် အခြေခံလစာကို သုံးသောင်း ကျပ် တိုးမြှင့်ပေးရန် မရမချင်း ထပ်မံ တောင်းဆိုသွားမည် ဖြစ်ကြော
Posted: 26 Feb 2015 06:34 PM PST
လောက်ကိုင် ဒေသခံ တချို့ လားရှိုးမြို့ မှာ သောင်တင် နေကြပါတယ်။ လောက်ကိုင် ဒေသမှာ တိုက်ပွဲတွေ အနည်းငယ် ဆက်လက် ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကာ အဲဒီ့ ဒေသက စစ်ဘေးရှာင် ဒုက္ခသည် တွေ လည်း လားရှိုး မြို့ ကို နေ့စဉ် ရောက်လာဆဲ ဖြစ်တယ် လို့ ဒုက္ခသည် တွေ ကို ကူညီ စောင့်ရှောက် နေသူတွေ က ပြောပါတယ်။ လောက်ကိုင် မှာ အလုပ် သွားရောက် လုပ် ကိုင်ရင်း စစ်ပွဲတွေ ကြောင့် ပြေးလာရတဲ့ သူတွေ ကို ယာယီ နားနေ စားသောက် ဖို့နဲ့ မန္တလေး ကို ဆက်လ
Posted: 26 Feb 2015 06:32 PM PST
FBI နဲ့ MI5 အေဂျင်စီ အပေါ် သုံးသပ်ချက် သတင်းမီဒီယာ တွေမှာ ဂျီဟာ့ဒီ ဂျွန် လို့ လူသိများနေတဲ့ မျက်နှာဖုံးစွပ် ဂျီဟဒ် လူသတ်သမား ရဲ့ အမည် ကို မိုဟာမက် အမ်ဝါဇီ လို့ ဖေါ်ထုတ်ယင်း၊ လန်ဒန်မြို့ အနောက်ပိုင်း မှာနေထိုင်ခဲ့သူ၊ ကူဝိတ်နိုင်ငံ မှာ မွေးဖွားပြီး ယူကေမှာ အခြေချ၊ ပညာသင်ခဲ့တဲ့ လူငယ် တဦး အဖြစ်ဖေါ်ထုတ် လိုက်ပါတယ်။ သူ့ ကို ဘယ်နည်းနဲ့ ဖေါ်ထုတ်ခဲ့တယ် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘီဘီစီ သတင်းထောက် ဖရင့်ဂါဒနာ က ရှ
Posted: 26 Feb 2015 06:26 PM PST
ဒီမိုကရေစီပညာရေး လှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ကော်မတီ နှင့် NNER အဖွဲ့၊ အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ ဆွေးနွေးပွဲမှာ စာရေးဆရာ ချစ်ဦးညိုမှ ကျောင်းသားသပိတ်နှင့် ပညာရေး ဥပဒေပြင်ဆင်မှု အပေါ် ထောက်ခံကြောင်း ပြောကြား။ သတင်းဓာတ်ပုံ- NNER ဖေဖေါ်ဝါရီ(၁၁)ရက်နေ့က လေးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ သဘောတူခဲ့တဲ့ အတိုင်း အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေအား ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ မူကြမ်းကိစ္စကို လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးဖို့ ဆက်ပြီးကြန့်ကြာနေမယ်
Posted: 26 Feb 2015 06:19 PM PST
ကျောင်းသားသပိတ်ရပ်ရေး လှည့်ကွက်တွေသုံးနေသလား အစိုးရက ဘယ်အဆင့်မှာမှ စိတ်ချယုံကြည်စရာ မကောင်းတဲ့ အစိုးရပါ. . . ဒီအတွက်လည်း လမ်းပေါ် ထွက်ပြီး သပိတ်တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲနေရတာဖြစ်တယ် . . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ အမျိုးသား ပညာရေးဥပဒေ ပြောင်းလဲရေး ဆန္ဒပြကျောင်းသား သပိတ်ကို တုံ့ပြန်ဆန္ဒပြမှုများ သဘောထား ကွဲလွဲမှုများကို အစိုးရအာဘော် သတင်းစာများမှ နေ့စဉ်ဆို
Posted: 26 Feb 2015 05:59 PM PST
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ အစိုးရက လေးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု သဘောတူညီချက်များအား အစိုးရက ဖောက်ဖျက်သော လုပ်ရပ်များ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး ဦးဆောင်လှုပ်ရှားမှု ကော်မတီနှင့် ပညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်(NNER) တို့က ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်ခင်စန်းရီ ထံသို့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်စွဲဖြင့် အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ရက် ပြုလု
အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှု တားမြစ်ဥပဒေကို ပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့ တောင်ကိုရီးယား တရားရုံး (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၅) တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ကာမပိုင်ရှိလျက် တခြား လူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာကို ပိတ်ပင် ကန့်သတ်ထားတဲ့ သက်တမ်း ၆၂ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ဥပဒေတရပ်ကို တရားရုံးတခုကနေ ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် ကွန်ဒွမ်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ နာမည်ကျော် ကုမ္ပဏီ တခုရဲ့ အစုရှယ်ယာဈေးနှုန်းတွေ ၁၅% အထိ ခုန်တက်သွားပါတယ်။ ဒီဥပဒေဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ေ
Posted: 26 Feb 2015 03:39 PM PST
မိုဆိုးလ် မြို့ ပြတိုက် အဖျက်စီး ခံရတာ ဟာ ကမ္ဘာ့ ယဉ်ကျေးမှု အမွအနှစ်တွေ အတွက် ကြေကွဲဖွယ်ရာ ဖြစ်တယ်လို့ UNESCO ရဲ့ အကြီးအကဲ Irina Bokova က ပြောပါတယ်။ အီရတ် နိုင်ငံ မိုဆိုးလ် မြို့ ပြတိုက်ထဲ က အနုပညာ နဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ ရှေးဟောင်း လက်ရာတွေ လို့ ယူဆ ရတာ တွေ ကို အစ္စလာမ်မစ် လက်နက်ကိုင် IS တွေ ဖျက်စီး နေတဲ့ ဗီဒီယို ထွက်လာ ခဲ့တဲ့ အတွက် ကုလ သမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီ အရေး ပေါ် အစည်း အဝေး ခေါ်ယူဖို့ UNESCO
Mohammed Emwazi ဟာ ကူဝိတ် မှာ မွေးကာ လန်ဒန်မြို့ မှာ ပညာ သင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စလာမ်မစ် အစွန်းရောက် IS အဖွဲ့ က လူတွေ ကို ခေါင်းဖြတ် သတ်တဲ့ ဗီဒီယို တွေထဲ မျက်နှာဖုံးစွပ် ဓားကိုင် လျက်သား တွေ့ခဲ့ ကြရပြီး ဂျီဟာ့ဒ်ဒီ ဂျွန် လို့ နာမည်ပေး ခံထားရသူ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း ပေါ်ထွက် လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသူရဲ့ နာမည်ရင်း ဟာ Mohammed Emwazi လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အမေရိကန် ဇာနယ်ဇင်းသမား James Foley နဲ့ ဗြိတိသျှ